July 29, 2019 adminAdventureLeave a Comment on OROMO DRAMA EELAA
Garuu dubbachuu fi falmuuf onnee isaa dhaban fakkaata. Siifan New Afan Oromo Film by waqo 1 year ago. Mulugeta Oro on Walaloo Haadhaa. Warri maqaaf Oromiyaa bulchanii fi Afaan Oromoon hojjechaa jiran dimma kana akkamiin akka ilaalanii fi hubatan Waaqni haa beeku. Jimaata Hunda Baacoo Tokko by daniboi 1 year ago. Dubbii cimaan kan afaan isaan hidhee fi harkaa miila isaan takaale akka jiru isaanis hin wallaalle.
Dhebbuu Dirama Afan Oromo Kuttaa 19ffaa 1 years ago. Every Friday One Jok. November 5, at 3: Notify me of new comments via email. Hayyoota eeguu qofa osoo hin taane marti keenya itti yaaduu fi waan nurraa eegamu dirqama Oromummaa bahuu qabna. Yoo isaan Afaan Oromoon hin barreessinee fi haala afaanii fi hogbarruun Oromoo irra jiru qoratanii ummataaf yaada hin akeekne, eenyurraa maal eegna? Afaan meeshaa sabni tokko aadaa, duudhaa, safuu fi seeda isaa ittiin ibsatu, mallattoo eenyummaa isaati.
New Oromo dirama amaasiloo kutaa 67ffaa feb 7 19 days ago. Kana sababa malee hin jenne.
Eelaa (Oromo Film) by Abreham Jallata Part 2 of 2 |
About Saphaloo Kadiir Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. Maxxansaa lammataa goone. Dadhabinaa fi kufaatii yeroo ammaa afaan keenyarra gahaa jiruuf kan komatamu alagaa qofaa? Kanas kan goonu, kitaabota, kaasetootaa frama walumaa galatti maxxansaalee afaan keenyaan bahan bituu fi dubbisuu, dubbifnee yaada itti kennuu fi qaama dhimmi isaa ilaalu jajjabeesuudha.
Oromo Afaan Oromoo Drama by mesi 1 year ago. You are commenting using edlaa Twitter account. New oromo drama diree wood 1 years ago.
Create a free website or blog at WordPress. Dhebbuu Dirama Afan Oromo Kuttaa 19ffaa 1 years ago. Seensa Seenaa Galma Guddaa Walaloo. Home Sign in Register. Madda Walaabuu qofaa miti. Saba tokko saba biraa irraa kan adda baasan keessaa tokko afaanii fi aadaa isaati. Kana ammoo Waaqayyo nu haa baraaru! Ajaa’iba Jaalala News Oromo drama by lulit 1 year ago.
New best dirama afaan oromoo jaalala soobbaa 4 months ago. Kaasetoonnii fi kitaaboti bahaa turanis hedduu turan. Oromo Best Comedy Ft Drama 9 months ago. Inniyyuu hanga tokko qofaatu gurgurama ture. Way Fadhii Too c Oromo Movie 10 months ago.
By continuing to use this website, you agree to their use. Keenyaaf daboo akka walii hin baane, akka wal hin tumsinee fi wal hin gargaarre kan nu dhorke, dhibeen maqaa fi dawaa hin qabne kun maali laata? September 25, at 7: Akka hubannaa fi ilaalcha kootti irra guddaa kan komatamuu qabu numa abbaa dhimmaa Oromoodha malee orma qofaa miti.
Скачать Ethiopian Movie Eelaa Best Afan Oromo Romantic Drama – смотреть онлайн
Diraamaa Gabaabaa – Oromo Drama 1 years ago. Ilkee – new Oromo Drama by sancho 1 year ago. Kitaabonni barumsaa kumaa fi kitilaan maxxanfamee manneetii barumsaaf raabsaman. Notify me of new posts via email. Koobili – New Oromo Drama 1 years ago.
Email required Address never made public. Nuf jiradhaa yaa lammi koo yaada akkasii nuf burqisisuu keessanif.
Barruuleen duraan maqaa isaanii tuttuqe, Qabee, Gadaa, Ichima, Biiftuu fi orlmo kana fakkaatan sababuma kanaaf itti fufuu dadhaban. New Afaan Oromo Comedy by new emerged comedian by sancho 1 year ago. New Oromo Movie Full by sancho 1 year ago. Tuuta Sirboota Durii Hallo Dawwe old song colleection playlist 4: Oduu Janajantoota Funny Oromo Drama by lulit 9 months ago.
Dirama Korkoro Gababa Afan Oromo by sancho 1 year ago.
Video oromo movie
Afaan otomo sabni tokko aadaa, duudhaa, safuu fi seeda isaa ittiin ibsatu, mallattoo eenyummaa isaati. Afaan keenya kan guddisu numa nuti eeggattummaa dhiifnee kara hundaan irratti haa hojjannuu.